Ku hagaaji Mac-gaaga xirmadan codsiyada oo keydi boqolaal yuuro | Waxaan ka socdaa mac
Ku hagaaji Mac-gaaga xirmadan codsiyada oo keydi boqolaal yuuro
Maalin ka hor buundo dheer oo mahadnaq ah, ayaa Waxaan ka socdaa mac Kuuma soo bandhigi doono hal dalab, laakiin shan, si aadan u heysan ilbiriqsi aad ku caajiso haddii, sida aniga oo kale, aad ku nagaan doontid guriga maalmaha soo socda.
Waa xirmo shan qalab ah oo aad ku isticmaali karto ka dhig Mac-gaaga mid diyaarsan oo ammaan ah, marka lagu daro sameynta degel qaab fudud ama sawirradaada ugu qaadaysa si kaamil ah. Baakad qiimaheeda ku dhow yahay 350 doolar oo hadda aad ku heli karto waxyar oo yuuro ah. ma rabtaa inaad ogaato waxa ku saabsan?
Muxuu ka kooban yahay xirmadan codsiyada loogu talagalay Mac?
Sidii aan horeyba u soo sheegnay, "Xadhigga" qalabka iyo yutiiligga ee loogu talagalay Mac wuxuu ka kooban yahay wadar ahaan 5 codsi oo kuwa soo socda ah:
TechTool Pro 9.5. Waa qalab aad ku adeegsan karto ku hayso Mac-gaaga nidaam hagaagsan oo shaqaynaya Hagaag, waxaad awoodi doontaa inaad qabato baadhitaan dhameystiran, oo ay kujiraan Motherboard-ka, taageerayaasha iyo waxyaabo kale oo badan, sidaa awgeed waxaad saadaalinaysaa dhibaato kasta oo timaada.
RapidWeaver 7. Qalab loogu talagalay kuwa doonaya dhiso bogga laakiin aqoon u lahayn HTML. Iyagoo adeegsanaya RapidWeaver 7 waxay ku guuleysan doonaan tan iyada oo ay ugu wacan tahay "isku xirnaan fudud oo la heli karo".
Gacmaha. Software awood badan oo aad ku awoodo ka hortag xogta daadinta oo xafid sirtaada
AfterShot Pro 3. Waa codsi ah Tafatirka sawirka RAW Waad ku mahadsan tahay taas oo aad awoodi doontid inaad soo dejiso oo aad wax ka beddesho sawiradaada si tayo sare leh laakiin adigoon ku dhibtooneyn cabirka weyn ee faylasha ee qaabkani soo bandhigayo. AfterShot Pro 3 wuxuu ku siinayaa xakameyn buuxda oo xirfad leh sawiradaada, adiga oo hal abuurkaaga gaarsiinaya heer cusub.
MacCleanse 6. Iyo ugu dambeyntii, tan nidaamka nadiifinta faylka ee Mac Taas oo aad awoodi doontid inaad ka hesho kana masaxdo kombiyuutarkaaga wax kasta oo saameyn ku yeelanaya waxqabadkeeda iyo sidan oo kale, Mac-du waxay u shaqeyn doontaa si habsami leh sida maalinta koowaad.
Qiimaha xirmada barnaamijkan waa $ 350, si kastaba ha noqotee hadda iyo shanta maalmood ee soo socda, waad heli kartaa in ka yar $ 15. Booqo bogga dhiirrigelinta, soo hel dhammaan faahfaahinta ku saabsan qalabkan, kana faa'iideyso dalabkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » Ku hagaaji Mac-gaaga xirmadan codsiyada oo keydi boqolaal yuuro
Apple waxay qiimeysaa xaalad ay shirkaddu ku bixiso canshuuraha waddanka ay wax ku iibiso
Rubuckani uma fiicnayn iibinta Mac, laakiin kumuu jirin kumbuyuutarrada sidoo kale